Chii Chinokochekera Murume paMukadzi | Stylish Men
Alicia tomero | 24/05/2022 14:08 | Kuchengetwa kwega, Vakaroorana uye Bonde
Unoda kuziva Nzira yekuita sei kuti murume ade mukadzi? Kunyange zvazvo zvichiita sezviri nyore, kune vakadzi vakawanda vasingazivi nzira yekuchengetedza hukama uye pane imwe nguva izvi zvinokonzera kusvava. Kana iwe uchida kuziva izvo zvinosungirira murume kubva kumukadzi, tinokupa mamwe akakosha matipi kuitira kuti shungu dzinoramba dzichichengeta spark.
Kana iwe ukatanga hukama, haufanire kuirega ichiwira mukukanganwa, iwe unofanirwa kugara chengeta mutsara uye usarega zvinhu zvose zvichiva tsika. Kazhinji varume vanosarudza vakadzi vanotapira, vane mutsa uye vanonzwisisa zvakanyanya.
1 Chii chinobata murume kubva kumukadzi?
2 Varume vanotsvagei pamukadzi?
2.2 The hwema
2.4 njere uye ruzivo
2.6 kusununguka mupfungwa uye mune zvemari
2.7 Unoda kuita sarudzo dzako
Chii chinobata murume kubva kumukadzi?
Kunyaradza kuva nemunhu iyeye uye kugamuchirwa kunokunda zvose zvinogona kuitika kechipiri. Murume anonzwa akasununguka kutaura manzwiro ake uye kwavanogona kumutsigira uye kunyange kupa anopfuura chidimbu chimwe chezano ndizvo zvavanoda.
Zvinoreva zvakawanda kupfuura zvinogona kutaurwa ndezvekuti mudiwa uyu anofanira kuve akatendeka, akavimbika, akavimbika, anoremekedza uye, pamusoro pezvose, ave nekuseka. Mukadzi anoziva kuterera, anoda bonde, anoziva kubika kunyangwe ari romantic idetails dzinoita kuti murume akochekere mukadzi.
Varume vanotsvagei pamukadzi?
El vane zvinhu zvakafanana uye govana zvinonaka zvakafanana nekuti hupenyu inyaya dzinogara dzichiita kuti vaviri vabatane. Tichaongorora kuti makiyi ekukwezva kwemurume kumukadzi anoshanda zvakaenzana kumashure uye kuti aya ndiwo mamwe e zvinhu zvinotariswa.
Pasina kupokana, fungidziro yekutanga ndiyo yakakosha, uye kunyangwe ingaite seyapamusoro, isu hatisi kuzozvinyengedza isu nepfungwa iyi. Zano nderekuti enda wakanaka uye wakanaka, asi zvakare simbisa hunhu hwe runako zvakasikwa. Mukadzi anogona kusawira mukati memutsara werunako uye achiri anoyevedza sevamwe.
Kunhuhwirira kwakanaka ndechimwe chezvinhu zvinokukochekera. muindasitiri yezvinonhuwira kune zvakawanda zvinonhuhwirira izvo zvave kuwanikwa kune chero munhu uye kuwana kushandisa imwe zvinoenderana nehunhu ndiyo yakanakisa mitambo. Kune rumwe rutivi, kune kunhuhwirira kwechimiro mukati memuviri wedu ndiko kwakanyanyisa uye ndiko kunoda kurangarirwa. Usakanganwa chimbuzi chakanaka uye rega muviri wako kunhuhwirira kwakachena nezvinoreva kunhuwa kwemuviri wako chaiwo.
Ndihwo humwe hunhu huri kuseri kweavo vakaongororwa, asi hune hunokosha hwakafanana. inzwi uye inzwi vanogona kubuda mumhanzi uye izvo zvinogona kutamba matinji.
njere uye ruzivo
Mufananidzo unoita zvakawanda kuti murume abatwe, asi kuseri kwawo kune njere dzevakadzi kuti iwe unogona kuchibata zvakanyanya. kana iripo kugadzirisa kusawirirana kuti zviitike nenzira inogoneka munguva yekunetsana, izvo zvinoita kuti murume agare.
Hapana chinovharisa munhu sekuona mukadzi anozvivimba, pasina kuzengurira, pasina kuita sarudzo uye pamusoro pezvose pasina kusachengeteka. Kuti vazive kutarisana nehupenyu nekudzikama uye kutsunga.
Kunyange kuzviriritira kunouya mukati mekuchengetedza uku. Kana mukadzi achikwanisa kugadzirisa kukakavara kwemanzwiro akazvimirira uye pasina rubatsiro rwemunhu chero upi zvake, anogona kukwezva zvikuru kumurume.
kusununguka mupfungwa uye mune zvemari
Vanhu vane rusununguko rwepfungwa vanokwezvaIvo vanofanirwa kuziva nzira yekuzvibvumira kudzora kushushikana uku uye kuve nehunyanzvi hwepfungwa-mupfungwa kutarisana chero mamiriro ezvinhu. Hatisi kutaura nezve kuita kutonhora uye kusafarira, asi nezve vane njere dzepfungwa uye kukwanisa kupa neshungu nguva yekunetsekana.
Kune rumwe rutivi, kuzvimirira mune zvemari kunogona kubata murume; asi kwete nekuda kwechokwadi chiri nyore chekukoshesa izvo zvaunazvo, asi zvekufungidzira izvo zvinozvigadzira pachazvo. Zvese izvi zvichave hwaro hwenzira yavo yakazvimiririra uye yakasarudzika yekuziva nzira yekuwana kugadzikana.
Unoda kuita sarudzo dzako
Vakadzi vanofarira rusununguko rwavo, uye varume vazhinji vanodarowo. Kuremekedza nzvimbo yemurume kwakakosha. Usanzwa uchida kumugovera chose chose, zvichida hausi kumupa nzvimbo duku iyoyo yaanoda. Somuenzaniso, kana murume akauya kumba achibva kubasa uye achida kugara pasi kwemaminitsi makumi matatu kuti azorore, zvakafanana nokumupa nzvimbo iyoyo.
Ndicho chikonzero chakanaka kuva nacho kuzvimiririra zvachose kubva kwauri Usatsamira pane vamwe vanhu pakuita sarudzo. Tsigiro inogara yakanaka, asi haufanirwe kupinda mutsika yekugara uchivimba nemumwe munhu kana chimwe chinhu.
Uye pamusoro pezvose, mukadzi wezvino anogara achifamba uye anofarira mutsva anofanana nekuwira murudo. Iva decisive iri kugadzirisa matambudziko wakazvimirira, kugara uchifambirana nenguva uye kushinga kutora njodzi. Zvikonzero zvese izvi ndizvo zvinokochekera murume here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kuchengetwa kwega » Chii chinokochekera murume kubva kumukadzi